Radio Tsy manavaka na iza na iza ny Radio Don Bosco. Miteny ho an'ny olon-drehetra, indrindra ho an'ny tanora satria tanora rahateo koa no manao azy. Na inona na inona kanto sy mahasoa eto Madagasikara dia aelin'i Radio Don Bosco
Feo miara-dàlana amin'ny olon-drehetra ny Radio Don Bosco: na ao an-tokantrano na an-dàlambe; maraina hatramin'ny hariva; mandritra ny alina ihany koa; an-tanàn-dehibe sy ny manodidina azy, any amin'ny tanàna sy vohitra mitsitokotoko eny ambanivohitra. Feo tsy mandao fa eo anila mandrakariva, indrindra ho an'ireo izay manirery, marary, saraka lavitra ny olon-tiany.
Radio mahatehotia manolotra ho anao: mozika, tantara, kolotsaina, vaovao, finoana, fialamboly, fanatanjahantena, vavaka, fihaonana, fanavaozana... mitondra ny feon'ny vahoaka, ny tanora, ny mahantra sy ny madinika.
Tonga teto Madagasikara ny salezianina tamin'ny 1981, nentanin'ny hafanampon'ny "Vina Afrika" (Projet afrique), ary avy hatrany dia nisongadina tamin'ny fitrandrahana ny sehatry ny Serasera.
Folo taona tato aoriana dia nitsiry ny hevitra hanao Radio, ho fitaovam-pitoriana ny Vaovao Mahafaly sy fampivoarana ny ara-tsôsialy.
Tanteraka ny nofinofy nony neken'i Mômpera Luigi Zuppini lehiben'ny Fikambanana sy ny filànkeviny ny faniriana hanao Radio. Voatendry ho tale voalohany i Mômpera Luca Treglia, nanampy azy niandraikitra ny fanofanana ny ho mpandraharaha i Mômpera Rosario Salerno.
Nandritra ny taona 1995 sy 1996 dia nanolotra fampiofanana mpandraharaha amina asa fampielezam-peo ity Radio vao hisokatra, hanomànany ny ho mpiasa ao aminy.
Raikitra fa "RADIO DON BOSCO" no hatao anarany ho fankasitrahana an'i Masindahy Joany Bosco mpanorina ny Fikambanana Salezianina. Ny teny faneva "Plus je l’écoute, plus je l’aime", dia manambara mazava ny fanamby avo lenta hametrahana ny Radio Don Bosco ho Filamatra eto an-drenivohitra Antananarivo. ("Arakaraka ny hihainoako azy no itiavako azy").
Ny 27 jona 1996 no notokànana ny Radio Don Bosco ka nampiely voalohany ny onjam-peony amin'ny fomba ôfisialy. Ny Kardinaly Armand Gaétan Razafindratandra no nitarika ny lanonana, notronin'ny olo-manan-kaja maro avy amin'ny sehatra pôlitika sy ara-kolotsaina.
Nandimby an'i Mômpera Luca i Mômpera Cosimo Alvati teo amin'ny fitantanana ny Radio, nanomboka ny taona 1998 hatramin'ny 2006.
Niverina kosa indray ny volana marsa 2006, ary talen'ny Radio Don Bosco mandraka ankehitriny, i Mômpera Luca Treglia.